Isitudiyo esinomtsalane kunye neTerrace ecaleni koLwandlekazi
Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Spain
Igumbi elinoxolo, elikhanyayo kunye nelanamhlanje elinendawo yokutyela enkulu phambi kolwandle lweAtlantiki kwilali ebukekayo yaseBoca Cangrejo.
Indawo efanelekileyo yokubalekela izibini ezithandanayo. Lala kwisandi solwandle kwaye uvuse ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 yokuhamba ukuya kunxweme lwesanti emnyama yendawo (i-Playa la Nea) kunye nemizuzu eyi-10 kuphela yokuqhuba ukuya kwisixeko esikhulu seziqithi, iSanta Cruz de Tenerife.
Indlu yestudiyo esandula ukwakhiwa enembono engakholelekiyo yolwandle, izinto zodidi oluphezulu kunye nethafa labucala elijonge emazantsi elibamba ilanga imini yonke.
I-studio ye-square yeemitha ezingama-40 ineengcango ze-sliding eludongeni ezinokuthi zivuleke ngokupheleleyo ukuze zenze indawo enkulu yokudibanisa i-70-metres square ngaphandle kwe-terrace. Iingcango zeglasi nazo zineemfama ezimnyama ukuze ukwazi ukonwabela ukuya kwakusasa ebhedini okanye ukulala emva kwemini ngeholide.
Yonwabela ukujonga isibhakabhaka esineenkwenkwezi ebusuku ukwibhedi ephindwe kabini. Kukho ikhabethe yokungena ngasemva kocango lwesilayidi ecaleni kwebhedi ukugcina zonke izinto zakho zobuqu.
Embindini we studio, kukho isofa encinci enetafile yekofu kunye nodonga olukhulu oluxhonywe 4k Smart TV.
Ukuya kufikelela esiphelweni sestudiyo yikhitshi elitsha kraca elinefriji yesimbo saseMelika, isitovu sombane esine-extractor yefeni, ibha yesidlo sakusasa enezitendi kunye nayo yonke into oyifunayo ukuze uzenzele. Nceda uqaphele ukuba amanzi kwisinki ekhitshini anobushushu kwaye akashushu.
Igumbi lokuhlambela elitsha kraca lineshawari yokuhamba-hamba kwaye yakhelwe ecaleni kwentaba, iveza iintshukumo ezinomdla zamatye amnyama.
Ithafa enkulu ejonge emazantsi inetafile kunye nezitulo ezibini ezitofotofo, iindawo zokuhlala ezimbini zelanga, i-BBQ kunye ne-awning yelanga.
4.79 · Izimvo eziyi-145
IBoca Cangrejo yilali yabalobi baseCanarian ebekwe ngokugqibeleleyo ukuphonononga yonke into esi siqithi.
Kukho ulwandle oluhle lwesanti emnyama oluhamba nje imizuzu eli-10 ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye namachibi amaninzi amatye kunye neendawo ezincinci ezinamatye onokuzijonga ngaselunxwemeni.
Ilali izolile kwaye izele ziintsapho zalapha. Igqibelele kumava ayinyani.
Ilali elandelayo ecaleni, iRadazul, inazo zonke izinto eziluncedo zalapha, kubandakanya:
- Iindawo zokutyela ezimbini zeentlanzi
- Indawo yokubhaka
- Olunye ulwandle (olulungele i-snorkeling) kunye ne-bar bar (elungele ibhiya kunye ne-snack)
- ivenkile encinci (SuperDino - 25 mins 'ukuhamba phezulu) kunye neposi
Ngelixa singayi kuba seflethini ngexesha lokuhlala kwakho, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo. Kwakhona sineengcebiso ezininzi zasekuhlaleni ukuze sabelane ngazo. Uya kufumana incwadi enemifanekiso yeendwendwe kwigumbi lokuhlala kunye nezinye zeendawo esizithandayo zasekhaya.
Ukungena, siya kukunika ikhowudi kwibhokisi yokutshixa ukuze ufumane izitshixo kwaye ungafika nanini na emva kwentsimbi yesithathu kwaye uzijonge. Nceda ubeke izitshixo phambi kokuba uphume ngo-11am.
Ngelixa singayi kuba seflethini ngexesha lokuhlala kwakho, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo. Kwakhona sineengcebiso ezininzi zasekuhlaleni ukuze sa…